गफ ! .....: लघुकथा : बुझाई
लघुकथा : बुझाई
संधैझैं सुब्बिनी भाउजु आठबजेतिरै खर्दारको मिलमा पुगिन् । उनको काम धानमिलको गोदाम , धान सुकाउन आँगनमा सिमेण्टले बनाएको ठुलो चट्टान र मिल राखेको घर सफागर्नु हुन्थ्यो साथै फाटेका बोराहरु सिलाउनु , छरिए पोखिएका धानचामल भेलागरेर केलाई कुलाई गरी जम्मा गर्नु जस्ता अतिरिक्त काम पनि आईपर्थ्यो उनलाई ।
मिलको आँगनमा खर्दार अरु एकदुईजना मान्छेहरुसंग कुरा गर्दैथिए । संधै त यसबेलासम्म मिल चल्न थालिसकेको हुन्थ्यो । आज के भएछ भन्दै उनि त्यतै गईन । उनिहरु भन्दैथिए , ' हैन यो ईन्धनको मुल्य पनि असाध्यै बढ्यो । यो सबै ईराक वारको परिणाम हो । '
मनमनै सोचिन् उनले 'यो ईन्धन भनेको चैं के र'छ ? मुल्ले बडो भन्छन ।'
उनिहरुको कुरा बुझ्ने प्रयत्न गर्दैथिईन् सुब्बिनि भाउजु , खर्दारले भने , 'ए भाउजु आज काम नहुने भो तिम्रो । दुख मात्रै पाईछौ यहाँसम्म आउन । अब मिल चलाई नसक्नु भै'गो । घर गए हुन्छ ।' उनले फर्कने आदेश पाईन् र लुरुलुरु फर्किन् ।
उनको मनबाट ईन्धन हटेन । कस्तो खालको धन होला यो ईन्धन भन्ने ? जिज्ञाशा भै रह्यो उनलाई । घर पुगेर छोरालाई सोधिन् , ' ए कान्छा ? हैन यो ईन्धन भनेको के रै'च हँ ? '
' किन चाहियो तिम्लाई ईन्धन र सिन्धन ? खै मलाई स्कुल जान ढिलो भै सको २० रुपियाँ देउ , डटपेन छैन । कतिदिन अर्काको मागेर लेख्नु ? ' सात कक्षामा पढ्ने कान्छाले उल्टै उन्को सातो खायो ।
' हैन ई छोराछोरी पढार पनि सुख छैन नपढार पनि सुख छैन ' पोल्टाबाट सुर्काने थैली झिक्दै भनिन् उन्ले , ' के राम्रै पात्तिएको ? नबुझेको त सोध्नै नहुने । ई ला बिस छैन दश लैजा , आफ्नो त दुमो पनि रहेन भएजति सबै तँलाई नै ठिक्क छ । '
उनको हातबाट चिलले चल्ला झम्टिएझैं दशको नोट थुत्दै कान्छाले भन्यो , ' चाहिएको पनि दश नै थियो तर दश भनेको भए पाँच देखाउंथ्यौ । मलाई था'छैन र ? ईन्धन भनेको मोटर गाडी चलाउने , मिल चलाउने र ठुला ठुला कार्खाना चलाउने तेल हो , भयो अब त ? ' कान्छा हान्नियो स्कुल तिर ।
' ए तेई भ'र पो मिल बन्द भएछ । तेत्रा खर्दारले पनि किन्न नसक्ने गरेर बढेछ है ईन्धनको मुल्ले त । धन्न हामी गरिबलाई त्यो ईन्धन नभए नि हुने नत्र हामी गरिबले के किन्न सक्थ्यौं होला र ? ' मनमनै गमिन् सुब्बिनी भाउजुले र प्रकट मै भनिन् , ' अब बुझें ईन्धन भनेको पनि । आँखिर कान्छालाई पढाको काम त लाग्यो । '
बिहानै घाम लाग्ला जस्तो भएपनि अहिले बाहिर पानी पर्न शुरु भैसकेको थियो । सुब्बिनी भाउजुको दिनभर काम केहि नै थिएन त्यसैले कान्छाले पकाएको भात खाएर घर बन्द गरेर गाउँतिर लागिन् । दिनभरी गाउँमै बिताईन् उनले न उनको बस्तुभाउ हेर्नु स्याहार्नु थियो न अरु कुनै काम । साह्रै फुर्सदिली थिईन् सुब्बिनी ।
साँझ घर आएर भात पकाउन अगेँनोमा आगो जोर्न के खोजेकी थिईन् उनिसँग घरमा मट्टितेल रहेनछ । लौ खा परेन अब फसाद ? सण्ठी , स्याउला सबै झरीले ओसिएको मात्र छ । थोरै मट्टितेल नचुहाए आगो सल्किनै मान्दैन । अब के गर्ने ? पकाएर खानु त पर्यो ; भएन राती सुतुञ्जेल कुप्पि पनि बाल्नै पर्यो । साँझ हस्याङफस्याङ गर्दै खर्दारको घर पुगिन् उनि । उनको लागी काम , दाम , माम सबै कुरामा हेरदेख गर्ने खर्दार नै त थिए । आँगनमै खर्दारकि श्रीमती भेटिईन् , ' ए दुलई लौ मेरो त अगेँनोमा आगै सल्केन अलिकति मट्टितेल पैंचो दिन्थेउकि भनेर आ'की , भोलीपर्सी किनेर दिम्ला........ ' सुब्बिनीले कुरा सक्नै पाएकी थिईनन् खर्दारले भने , ' हैन ए भाउजु त्यही तेल नपाएर आज देखि मिल बन्द भो , कतिदिन भैसक्यो किन्नलाई पैसा ले'र जाँदा पनि पाईएको
छैन , कहाँबाट ल्याउने हो मट्टितेल ? धन्न ग्याँसले थेगेको छ हाम्रो त्यो पनि भरैभोली देखि सकिन्छ ।'
कुन्ताको अँध्यारो त्यसमाथी अँध्यारै मुख लाएर फर्किनुको बिकल्प थिएन सुब्बिनीसँग । फर्किंदा बाटोमा सोच्दै थिईन् उनि , ' थुक्क ! यो ईन्धन भनेको त हामी गरिबले बाल्ने मट्टितेल पनि पो रहेछ । बल्ल अब चैं बुझें ईन्धन भनेको , गरिबसँग नहुने भएपछि धन नै त भयो नि ईन्धन भने नि जुन् धन भने नि , थुक्क ! ईन्धन । ' अँध्यारोमा सुमुसुमु घर फर्किन् सुब्बिनी भाउजु ।
नेपालमा पछिल्लो पटक ईन्धनको मुल्य बढेकोमा विरोध गरिएको खबर सुनेको बेला लेखेको यो न नयाँ न पुरानो लघुकथाले यतिबेला गर्जो टार्दैछु ब्लगमा ।
Posted by दीपक जडित at 5:53 AM
समयसापेक्ष र रोचक कथा!
सुब्बिनी भाउजुले बढो मार्मिक तर व्यावहारिक तरिकाले "ईन्धन" को अर्थ बुझीछन।
मलाई लाग्छ तपाईको कथाको "सुब्बिनी भाउजु"ले कम्तिमा पनि १ वा डेढ करोड नेपाली गृहिडिको प्रतीनीधित्व गरेको हुनुपर्छ र दिनदिनै उनिहरु "ईन्धन" मात्रै हैन "दलहन", "तेलहन" र "यातायात" र अन्य यस्तै नया नया शब्दहरुको अर्थ कहिल्यै नबिर्सने गरि बुझ्दै होलान् ।
देश यिनै भातमाराहरुले यहि नौटंकि पाराले चलाउदै गरें भने अब "ईन्धन" मात्रै हैन "खाद्य पदार्थ", "लत्ता कपडा" र "औषधि उपाचार" को अर्थ पनि सबैले अझ "राम्ररी" बुझ्नेछन् ।
कथा राम्रो र समय सपेक्षा छ, आज तपाईं हाम्रो सामु सुब्बेनी भाउजु जस्ता गरीबि र अशिक्षाको ओढारमा हुर्केका थुप्रै भाउजुहरु छन ।ती भाउजुहरुकै क्रान्दन हो ।
कथा मर्मिक छ, दिपक जी । लेख्दै जानु होला ।
धन्यवाद दिलीप जी र दमौली ब्लग संचालक
अबोध परेलीहरुको बारेमा
गजल : मौका उछिटे ठुलाले
उपराष्ट्रपति Jhaa चाहिँदैन
गजल : तिम्रो ख्याल आयो
गजल : एक एक 'अक्षेर'मा रुवायौ
गजल : भाँची राख
Dialogue on Equality ?